Shah Rukh Khan oo si layaab leh oga jawaabay su'aal la weeydiiyay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka RED CHILLES
Jilaaga caanka ah ee jila Aflaanta Bollywood, Shah Rukh Khan ayaa taageerayaashiisa barta Instagram ka codsaday inay su'aalo soo weydiyaan.
Shah Rukh Khan ayaa waxa loo soo bandhigay su'aalo kala duwan balse hal mid ayaa soo jiidatay isaga.
Mid ka mid ah taageerayaasha ayaa jilaaga weydiiyey sababta uu u guursaday isaga oo da'yar. Hase yeeshe Shah Rukh ayaa ka bixiyay jawaab aad u soo jiidatay dadka.
"Walaal , jacayl iyo nasiib waxay wehel kula noqon karaan mar uun, marka labada waxaan ka helay xaaskayga Gauri" Ayuu yiri Shah Rukh..
Qaar ka mid ah jilayaasha ugu caansan dalka Hindiya ayaanan weli guursanin, su'aalaha ugu badan ee la weeydiiyana ay yihiin sababta ay u guursan waayeen, halka Sha Rukh Khan la weeydiiyay su'aal taas cagsigeeda ah.
"Dabcan waxaa laga yaabaa in aan sameeyay Filim aan sheekadiisa la jecleysanin, waxaan ka walaac sanahay in uu suuq ka heli doono Shiinaha, balse waxaan rajeynayaa inay shacabka Shiinaha ka helaan", ayuu yidhi Shahrukh Khan oo wareysi siinayay telefishinka dowladda Shiinaha.
"Wakhti badan ayaannu galinay sameynta filimkan, aad ayaan uga walwalay oo waxaan gaaray heer aan mardambe dib u daawanin Filimka, marka Filim saddex sano aad sameneysay ay dadku iska diidaan aad ayaad uga murugoneysaa, balse saddex bilood kadib ayaan dib uu eegi doonaa", ayuu hadalkiisa raaciyay Shahrukh Khan.